10 Ary nanendry fitopolo+ lahy koa ny Tompo taorian’izany, ka naniraka azy tsiroaroa+ hialoha azy tany amin’ny tanàna sy ny toerana rehetra izay mbola halehany. 2 Dia hoy izy tamin’ireo: “Be tokoa ny vokatra,+ fa ny mpiasa+ no vitsy. Koa iangavio+ ny Tompon’ny vokatra mba haniraka mpiasa+ hijinja ny vokatra. 3 Koa mandehana! Maniraka anareo aho, ka ho toy ny zanak’ondry+ eo afovoan’ny amboadia ianareo. 4 Aza mitondra fitoeram-bola na kitapom-batsy+ na kapa, ary aza mandany fotoana amin’ny fombafomba fifampiarahabana+ eny an-dalana. 5 Ary amin’izay trano idiranareo, dia milazà aloha hoe: ‘Ho amin’ity trano ity anie ny fiadanana!’+ 6 Koa raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra eo aminy ny fiadananareo,+ fa raha tsy izany kosa, dia hiverina aminareo izany.+ 7 Koa mitoera ao amin’izany trano izany,+ ary hano sy sotroy izay omeny,+ fa mendrika hahazo ny karamany ny mpiasa.+ Aza mifindrafindra trano.+ 8 “Ary izay tanàna idiranareo ka mandray anareo ny olona, dia hano izay aroso anareo, 9 sitrano+ ny marary ao, ary lazao foana hoe: ‘Efa manakaiky anareo ny fanjakan’Andriamanitra.’+ 10 Fa izay tanàna idiranareo nefa tsy mandray+ anareo, dia mankanesa eny amin’ny lalambeny, ka milazà hoe: 11 ‘Na ny vovoky ny tanànanareo izay manaraka ny tongotray aza, dia fafanay mba hiampanga anareo.+ Tadidio anefa fa manakaiky ny fanjakan’Andriamanitra.’ 12 Lazaiko aminareo fa ho mora kokoa ny hanjo an’i Sodoma+ amin’izany andro izany noho ny hanjo an’izany tanàna izany. 13 “Lozanao, ry Korazina!+ Lozanao, ry Betsaida!+ Raha tany Tyro sy Sidona mantsy no nanaovana ny fahagagana natao tao aminareo, dia ho efa nibebaka hatry ny ela ireo ka nipetraka niakanjo gony sy nihosin-davenona.+ 14 Koa ho mora kokoa ny hanjo an’i Tyro sy Sidona amin’ny fitsarana, noho ny hanjo anareo.+ 15 Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra ho any an-danitra ve ianao?+ Any amin’ny Fasana*+ kosa no hidinanao! 16 “Izay mihaino+ anareo dia mihaino ahy. Izay tsy manaiky anareo dia tsy manaiky ahy. Ary izay tsy manaiky ahy dia tsy manaiky+ an’ilay naniraka ahy.” 17 Ary faly ireo fitopolo lahy rehefa niverina, ka nanao hoe: “Tompo ô, manaiky anay hatramin’ny demonia+ noho ny fampiasanay ny anaranao.” 18 Dia hoy i Jesosy tamin’ireo: “Hitako fa efa nazera toy ny tselatra avy any an-danitra i Satana.+ 19 Efa nomeko fahefana hanitsaka bibilava+ sy maingoka+ ianareo, ary handresy ny hery rehetran’ilay fahavalo,+ ka tsy hisy hampaninona anareo. 20 Na izany aza, dia aza mifaly satria hoe manjary manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia kosa satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo.”+ 21 Tamin’izay ora izay indrindra, dia faly be+ i Jesosy sady feno fanahy masina, ka nanao hoe: “Midera anao ampahibemaso aho, Ray ô, Tompon’ny lanitra sy ny tany, satria nataonao tsara afina tamin’ny hendry+ sy ny mahira-tsaina izany, fa nahariharinao tamin’ny zaza kosa, satria izany no sitrakao, Ray ô! 22 Efa natolotry+ ny Raiko ahy ny zava-drehetra, ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray,+ ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny Zanaka+ sy izay tian’ny Zanaka hampiharihariana ny Ray.” 23 Dia nitodika tany amin’ny mpianatra izy, ka nilaza taminy nitokana hoe: “Sambatra ny maso mahita izay hitanareo.+ 24 Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita+ izay hitanareo ankehitriny fa tsy nahita, sy naniry handre izay renareo ankehitriny fa tsy nahare.” 25 Ary nitsangana ny lehilahy anankiray nahay Lalàna,+ ka izao no nolazainy mba hitsapana azy: “Mpampianatra ô, inona no hataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”+ 26 Koa hoy i Jesosy: “Inona no voasoratra ao amin’ny Lalàna?+ Ahoana no fahazoanao azy?” 27 Hoy ny navaliny: “‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo’,+ ary ‘tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’”+ 28 Dia hoy i Jesosy: “Marina ny navalinao. ‘Izany foana atao dia hahazo ny fiainana ianao.’”+ 29 Te hanaporofo anefa ilay lehilahy fa marina ny tenany, ka hoy izy tamin’i Jesosy: “Fa iza marina moa no namako?”+ 30 Dia hoy ny navalin’i Jesosy: “Nisy lehilahy nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko. Ary azon’ny jiolahy izy io, ka nendahany sady nokapohiny, ary nilaozany teo rehefa saika maty. 31 Ary sendra nidina tamin’iny lalana iny ny mpisorona anankiray, kanefa niampita rehefa nahita azy ary nandalo fotsiny.+ 32 Ary nidina tamin’iny toerana iny koa ny Levita anankiray ka nahita azy, ary niampita sy nandalo fotsiny koa.+ 33 Fa nandeha tamin’ilay lalana kosa ny Samaritanina+ anankiray ka tonga teo aminy, ary nangoraka rehefa nahita azy. 34 Koa nanatona izy, ary nofeheziny ny ratrany sady nasiany menaka sy divay.+ Avy eo, dia nataony teo ambony ampondrany izy, ka nentiny tany amin’ny tranombahiny ary nokarakarainy. 35 Ary namoaka denaria roa izy ny ampitson’iny, ka nomeny an’ilay tompon’ny tranombahiny, dia hoy izy: ‘Karakarao izy, fa haloako izay laninao ankoatra an’ireto, rehefa miverina aho.’ 36 Iza amin’izy telo ireo no heverinao fa lasa naman’ilay+ azon’ny jiolahy?” 37 Hoy izy: “Ilay niantra+ azy.” Dia hoy i Jesosy: “Mandehana àry, ka mba manaova+ toy izany koa.” 38 Ary raha nandeha izy ireo, dia niditra tao amin’ny tanàna kely anankiray i Jesosy. Dia nisy vehivavy atao hoe Marta+ nampiantrano azy. 39 Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo an-tongotry+ ny Tompo ka naharitra nihaino ny teniny. 40 Fa tsy nifantoka+ kosa ny sain’i Marta, satria nanao raharaha betsaka izy. Ary nanatona izy, ka nanao hoe: “Tompo ô, tsy mampaninona anao ve ny hamelan’ny rahavaviko ahy hanao raharaha irery toy izao?+ Koa mba asaivo manampy ahy izy.” 41 Fa hoy ny navalin’ny Tompo azy: “Marta a! Marta a! Maro ahina+ sy sahiran-tsaina amin-javatra maro+ ianao. 42 Zavatra vitsivitsy+ ihany anefa no ilaina, eny, iray monja aza. Fa i Maria kosa nifidy ny tsara kokoa,+ ka tsy halaina aminy izany.”